Ny fifehezana sy fiankinan-doha amin'ny fitsorohana an-tsokosoko amin'ny lalao Olaimpika | Androidsis
Fandroahana tsara miaraka amin'ireo fitsambikinana mahavariana an'ny Flip Diving
nefa misy fahavaratra kely sisa ary io volana aogositra io, fa saika ny fahavaratra dia manao veloma fa tsy tadiavintsika izany. Ireo hafanana, mari-pana ambony, dobo filomanosana ary morontsiraka ireo dia nanampy anay nilentika isan-karazany mba hanamaivanana ireo andro nandanian'ny maro azy io teny amorontsiraka. Manana lalao mamelombelona isika, fa ilay tonga ao an-tsaina dieny izao Noana Shark World, lohateny ahafahanao milentika anaty rano lalina amin'ny alàlan'ny fanovana ny tenanao ho antsantsa noana be ary te hampatahotra anao.
Fa raha tena te hamelombelona ny tenantsika isika, Flip Diving dia iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'izao fotoana izao raha ny tadiavintsika dia milentika tsara ary manao ireo fitsambikinana mahavariana indrindra avy amin'ny vatolampy. Toy ny hoe tany amin'ny Lalao Olaimpika isika, tsy maintsy mitsambikina anaty rano isika hanatanterahana ireo pirouettes izay irintsika hilatsaka tsara any amin'ireo rano ireo izay mety hanjary olana lehibe raha ny kibony na ny lamosintsika no ampiasantsika toy ny parapet. Flip Diving dia lalao mahafinaritra sy manokana izay hahatonga anao ho voahidy tsy andrasanao.
1 Raiso ny hitsambikina tsara indrindra
2 Ny karazana fomba mitsambikina rehetra
Raiso ny hitsambikina tsara indrindra
Miniclip, ilay studio miandraikitra ny fitondrana Flip Diving ho antsika, mazàna dia mamoaka lalao mahafinaritra, mora lalaovina ary afaka manana zavatra mampiankin-doha mitondra antsika hiverina aminy. Tao amin'ny Flip Diving dia nahavita an'io indray izy ireo ary nanaparitaka izany tamin'ny sasany Sary 3D tena manaitra tokoa izany; Manome ny fahatsapana hiditra ao anaty rano tanteraka izy ireo, na noho ny fomba fijeriny ny zava-misy na ireo vokam-peo tena nahomby.
Flip Diving no hitondra anao alohan'ny fomba hafa amin'ny jumps amin'ny alàlan'ny tontolo iainana isan-karazany izay hampiavaka ny lalao tsirairay. Rehefa milalao bebe kokoa ianao dia afaka mamoha ireo tontolo iainana ireo amin'ny vato vaovao, haavo ary fomba samihafa. Isaky ny 24 ora dia azonao atao ny miditra amin'ny raffle izay anolorana anao fomba vaovao hitsambikinana mba hahafahanao maneho ny lanja lehibe anananao amin'ity fahaiza-manao ity.
Ny dingana mitsambikina dia tsotra ary miaraka amin'ny tsindry isika hahazo tombony, ka rehefa navotsotra ilay mahery fo dia nitsambikina tao anaty rano. Raha tazomintsika indray ny fikotrokotroka dia hahatonga ilay pirouette manokana amin'ny fomba mitsambikina izany mba hanananay fahaizana mamaritra mazava tsara fa miakatra eo an-dohany izy, raha tsy izany dia kapoka mafy no hamelezana ny rano.
Ny karazana fomba mitsambikina rehetra
Ankoatra ny fahazoana fomba mitsambikina vaovao dia hisafidy ihany koa ianao endri-tsoratra sy faritra vaovao amin'ny sarintany ahafahanao manao pirouettes samihafa amin'ny rivotra. Azonao atao koa ny mividy tapakila ho an'ny raffles mba hahafahanao manana safidy bebe kokoa. Eo indrindra no misy ny fanangonam-bola an'ity lalao video ity.
Ny fomba hafa hamohana ny atiny dia ny vola madinika. Ny farantsakely dia omena ny manao jumps avo lenta. Rehefa manangona vola madinika bebe kokoa ianao dia hamela anao hilalao sary indray ny lalao. Azonao atao ihany koa ny mijery ny dokam-barotra hahazoana vola madinika isan-karazany.
Ny haavony dia voaforon'ny fitsambikinana sy haavo. Raha mahavita ny fitsambikinana voalohany ianao dia hiakatra ambony amin'ny vatolampy manaraka mandra-pahatonganao any amin'ny haavo avo indrindra ka ho sarotra kokoa ny fitsambikinana satria mila maneuves be kokoa ianao. Hanana izany ianao Fomba mitsambikina 20 isan-karazany ary mpitsambikina marobe hamaha. Ny tontolo iainana dia misy ny karazany rehetra ary ny marina dia niasa teto izy ireo, noho izany dia hanana lalao maro mialoha ianao.
Flip Diving dia a Lalao mahafinaritra ary hita maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store. Manasongadina indrindra ny atiny ananany sy ny fanatanterahana ireo fitsambikinana izay tsy ho mora. Aza adino fa manana safidy hilalao azy ianao avy amin'ny tranonkala raha te hanohy amin'ny solosaina findainao ianao.
Gaga be tamin'ilay sary an-tsaina tsara natao ary rehefa latsaka ao anaty rano ianao dia mahazo isa bebe kokoa na latsaka. Ny sary dia zava-misy ary mitondra antsika any amin'ny ranomasina mba hahatsapa fa tena miditra anaty rano tokoa isika. Amin'ny ankapobeny, nahavita lalao ara-teknika lehibe izy ireo, ka tsy misy omena tsiny.
Atsimbadiho ny Diving
Animations tena tsara novonoina
Izay atiny freemium ...
Developer: MotionVolt Games Ltd.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Fandroahana tsara miaraka amin'ireo fitsambikinana mahavariana an'ny Flip Diving